Bentley Systems dia mandefa ny fanolorana ho an'ny daholobe voalohany (IPO) - Geofumadas
Novambra, 2020 jeospatial - GIS, Engineering, Microstation-Bentley
Bentley Systems dia nanambara ny fanombohana ny fanomezana am-boalohany ny fizarana 10,750,000 amin'ny fizarana iraisan'ny Class B. Ny fizarana iraisana Class B. izay atolotra dia hamidin'ny tompon-trano Bentley efa misy. Ireo tompon'andraikitra mivarotra dia manantena ny hanome ny mpisoratra anarana amin'ny fanolorana safidy 30 andro hividy hatramin'ny 1.610.991 ampaham-bola fanampiny an'ny Class B iraisan'ny tompon-tany mivarotra. Ny vinavinam-panolorana ho an'ny daholobe voalohany dia eo anelanelan'ny $ 17,00 sy $ 19,00 isaky ny anjara. Bentley dia nangataka ny hanao lisitra ny anjarany ao amin'ny NASDAQ Global Select Market eo ambanin'ny marika "BSY."
Goldman Sachs & Co. LLC ary BofA Securities dia mpitantana ny boky ary ny RBC Capital Markets dia mpitantana ny boky natolotra. Baird, KeyBanc Capital Markets ary Mizuho Securities dia mpiandraikitra mpiara-miasa amin'ilay tolotra natolotra. Ny anjaran'ny orinasa dia nitombo 52% tamin'ny andro voalohany nifanakalozana. Ny fizarana dia nisokatra tamin'ny $ 28 tamin'ny Alarobia ary nikatona tamin'ny $ 33,49 avo indrindra teo amin'ny tsenan'i Nasdaq.
Greg Bentley, Filoha, CEO ary filoha dia nilaza fa, amin'ny anaran'ny orinasa dia faly izy nahatratra io dingana lehibe io. Nanampy izy fa manantena izy ireo fa hisarika ny sain'ny injeniera sivily sy ny rafitra ny IPO izay manangana rafitra rano maloto, seranam-piaramanidina, lalambe ary lalan-drivotra.
Zava-dehibe amin'ny geoengineering?
Bentley dia nijanona ho toy ny iray amin'ireo mpitarika amin'ny haitao fananganana, miloka amin'ny fampidirana ireo teknolojia fitantanana angona amin'ny tetik'asa injeniera sy ny fananana. Inona no nahatonga ny fahazoana dingana mazoto sy mahomby izay hamaritana mialoha ny karazan-doka rehetra. Tsy zava-baovao ity fanapaha-kevitra ity hivoaka ampahibemaso, satria izy ireo dia nitazona ireo hetsika ireo tamin'ny alàlan'ny fifanarahana manokana, na izany aza, rehefa afaka 36 taona dia nosokafana ampahibemaso io tolotra io tamin'ny alàlan'ny Tsena Nasdaq Global Select.
Nandritra ny 36 taona dia nanompo injeniera tamin'ny alàlan'ny rindrambaiko izahay, mino fatratra fa ny fotodrafitrasa mahomby kokoa ary maharitra kokoa dia ilaina amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fiainana ho an'ny olona na aiza na aiza, hitohanana ny tontolo iainantsika ary hampitombo ny harinkarena. Greg Bentley, tale jeneralin'ny Bentley Systems.
Tsy azo ihodivirana ny tsy manontany tena: Inona no maha-zava-dehibe an'io dingana io eo amin'ny tontolon'ny Geoengineering? Amin'ny lafiny iray dia hanova ny fomba fikirakirana ny fividianana vokatra sy ny fandrindrana hetsika mifandraika amin'ny fananganana izany, fa tsy ho amin'ny tsara kokoa, fa amin'ny tsara kokoa. Mampiroborobo ny famoronana vahaolana mifandraika amin'ny sehatry ny fotodrafitrasa (na amin'ny serivisy ho an'ny besinimaro, na tranobe, na drafitra an-tanàn-dehibe na fitantanana rano), mampitombo ny dinamika amin'ny tsingerim-piainan'ny fampahalalana, ny fananganana sy ny fiasan'ny zavatra, izay mihalehibe amin'ny fampidirana azy BIM sy DT (Kambana nomerika, kambana nomerika).
Ny iraka ampiasain'ny matihanina Geoengineering dia ny hiditra amin'ity tontolo vaovao ity, izay nanao fomba feno herisetra, nanararaotra ireo teknolojia izay manamora ny famolavolana, ny maodely, ny fanadihadiana, ny fitehirizana, ny fananganana ary ny fanaraha-maso ny angona. Ny teknolojia tsirairay ao amin'ny rojom-pifandraisana AEC (Architecture, Engineering, Construction) dia mitaky fampidirana tanteraka, DT sy BIM no mety ho fomba lehibe indrindra amin'ny fitantanana fotodrafitrasa, saingy tsy tokony hatao ambanin-javatra velively ny singa spatial. Mahery vaika ny fitambarana BIM + DT + GIS, ary io no fototra hijanonana hanjakan'ity revolisiona indostrialy faha-4 ity.
Nalaina tao Gazety Twingeo Fanontana faha-5
Previous Post«Previous TwinGEO Fanontana faha-5 - Ny fomba fijery ara-jeografia
Next Post Master amin'ny Geometry ara-dalàna.manaraka »